Mahatsiaro rahonan’ny bilaogera ny fitondrana ao Afovoany Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2019 6:48 GMT
Toy izany ny anjara toeran'ny bilaogera sy ny olo-tsotra tia mampita vaovao amin'ny fandrehetana ny vanim-potoanan'ny hatezerana manohitra ny didy jadona ao amin'ny faritra; hita ho loza mitatao ry zareo amin'ny toe-draharaha. Misy ankehitriny ny fanentanana fisamborana, fampitahorana sy fanorisorenana atao azy ireo.
Ao Bahrain, miatrika fanaraha-maso goavana ataon'ny manampahefana sy ireo izay manohana ny governemanta ankehitriny ireo bilaogera sy mpikatroka antserasera, hoy ny France24..
“Notazonina tamin'ny toerana tsy fantatra nanomboka tamin'ny 30 martsa i Mohamed Al-Maskati, fanta-daza amin'ny solon'anarana hoe “Emoodz” . Navitrika tokoa tao amin'ny bilaoginy sy tao amin'ny tambajotra sosialy ity tovolahy ity, niresaka ny zava-nitranga vao haingana tao amin'ny fireneny sy ny tontolo Arabo. Araka ny filazan'ny fikambanana “Reporters Sans Frontières“, voalaza fa nahazo fandrahonana tao amin'ny Twitter i Al-Maskati taloha kelin'ny nisamboran'ny mpikambana iray tao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka azy. Nanao fanentanana ho famotsorana azy nanomboka teo ny mpiserasera, tamin'ny alalan'ny “Free emoodz sy ity bilaogy ao amin'ny tranonkala bilaogy bitika ity.
Ary tahaka an'i Al-Maskati, bilaogera manan-danja am-polony sy mpanentana momba ny fahalalaham-pitenenana no lasibatry ny manampahefana “
Ao Dubai, heverina ho oasis ahitana tontolo misokatra ho an'ny fihariana sy sakaizan'ny vahiny, bilaogera iray mitaky fanavaozana no nosamborina. Hoy ny Eurasia Review,
“Nilaza ny gazety emiràty iray tamin'ny Alahady fa nosamborin'ny polisy tao Dubai ny bilaogera iray sady mpikatroky ny zon'olombelona, ​​Ahmad Mansur, izay voalaza fa nanentana hisian'ny fifidianana malalaka ary nitaky fanavaozana ao amin'ny firenena.
Nilaza ity gazety nasionaly ity fa nanomboka fanadihadiana heloka bevava tamin'i Mansur ny polisy ao Dubai saingy tsy nety nilaza izay fiampangana. “
Mbola mahagaga koa fa zava-malaza any Ejipta ny endrika “misokatra” an'i Dubai. Mihelina ankehitriny ny fotoanan'ny hatezerana sy ny rehareha any Afovoany Atsinanana. Mitatitra ny Los Angeles Times fa voaheloka higadra telo taona an-tranomaizina ny bilaogera iray noho ny fitsikerana ny miaramila.
“Nosamborina tamin'ny 28 martsa i Maikel Nabil Sanad rehefa nanoratra tamin'ny bilaogy fa” nomena porofo manamarina izy fa nandiso fanantenana ny Ejiptiana ny miaramila” nandritra sy taorian'ny fikomiana 18 andro izay nanomboka ny 25 Janoary ary nifarana tamin'ny fionganan'i Mubarak. Jeneraly ambony ao amin'ny filan-kevitry ny miaramila ankehitriny no mitantana ny firenena.
Naneho ny fahagagany tamin'ny sazy azon'i Sanad ireo mpiaro ny zon'olombelona, indrindra rehefa nomena antoka ny mpisolovavany tamin'ny alahady fa tsy hambara alohan'ny talata ny didim-pitsarana. Saingy ny alin'ny Alahady, nambara mangina fa meloka izy ary voaheloka higadra. “
Karazana demaokrasia inona no nampanantenaina ny vahoakan'i Ejipta raha toa ka heloka bevava azo saziana ny fitsikerana ny miaramila? ary “ambara mangingina” ny sazy?
Mazava fa tsy vonona ny handefitra mihitsy ireo izay maniry sy mitaky ny tsy hanovana na inona na inona, vonona ny hanohitra izay ezaka rehetra hametraka rafitra tena misokatra izy ireo. Raha mahatsiaro i Ejipta “afaka” fa tokony hatahorana ny bilaogera, inona no azontsika antenaina amin'ireo olon-kafa izay mbola mirehareha amin'ny fitondran'olon-tokana ataon-dry zareo?